एजेन्सी, कुनै एउटा गाउँ सिर्फ एक जना मानिसको कारण धनि बन्न सक्छ तर केहि समय गरिएको मिहिनेतले मात्र यो सम्भव छ । तर एक्कै रातमा गाउँभरिका मनिसहरु करोडपति भएका छन् । यो कुरा सुन्दा चलचित्रको नाटकमा भन्दा केहि कम छैन तर उनीहरु साच्चिकै करोडपति बनेका छन्।
स्पेनको सिरिजेल्स डेल कोन्डान्डो भन्ने गाउँमा उक्त करोडपतिहरु बस्दै आएका छन्। त्यो गाउँमा ८० घर परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। त्यसै गाउँमा जन्मेका एन्टोनिनो फर्नाडिजले रातारात गाउँलाई धनी बनाएका हुन्। उनी चर्चित कोरोना बीयर कम्पनीका मालिक थिए । अरबौका मालिक रहेका उनि आफ्नो गाउँलाई एकदमै माया गर्ने व्यक्ति थिए । गाउँका बच्चाहरु एन्टोनीकै कारण पढ्न जान्थे ।
अहिले उनको मृत्यु भइसकेको छ । उनी त्यहाँका हरेक मानिसलाई सहयोग गर्थे । त्यसैले उनले आफ्नो मृत्युअघि नै आफुसँग भएको सबै सम्पति गाउँभरिका मान्छेलाई भाग लगाईदिएका थिए । मिडिया रिपोर्ट अनुसार यसरी भागबन्डा लगाउँदा त्यहाँका हरेक व्यक्तिको नाममा करिब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सम्पति प्राप्त भएको थियो । यसरी उनले आफ्नो सम्पति गाउँलेलाइ दिएपछि गाउँका सबै मान्छेहरु एकदम खुशी भएका थिए।
प्रकाशित : सोमबार, माघ २९, २०७४१०:५८
श्रीमतीको लागि यी बुजुर्ग पतिले यस्तो आश्चर्यजनक उपहार लगेपछि भयो हंगामा !
समुन्द्रबाट निक्लियो यस्तो अजिव वस्तु ! स्थानीय अक्क न बक्क, हेर्नेको लाग्यो भिड !
१० वर्ष लगाएर बनाइएको यो टेबुल, जसको मूल्य १ अर्ब २६ करोड ! के हो रहस्य ?
युद्धका कारण छेद-विच्छेद भएका यी ३ देश!जहाँ मानव अस्तित्वनै घरापमा छ!
युटुबमा हिट हुने चक्करमा प्रेमीको ज्यान गयो प्रेमिकालाई जेल सजाय
आजभन्दा २०० वर्षअघि यसरी गरिन्थ्यो शल्यक्रिया, हेर्नुस् शल्यक्रिय गर्दाका भयानक केही तस्बिरहरू
यी चार युवतीले गरे रियालिटी शोमानै यस्तो अश्लिल हर्कत ! तस्विर भए भाइरल !
२ घण्टा अगाडि BNNTV